Sunday April 19, 2015 - 12:14:56 in Maqaallo by Super Admin
Isla markana ku bilowday ibin bilaa naxaqriis ah. Xukuumada uu Gadh-wadeenka ka yahay Madaxweyne siilaanyo ayaa ku hawlan qorshe ay shacabku uu bixiyeen iskaba raacinta Hantida Ma-guurtada ah ee Dawlada. Muddaadi uu xilka Hayey madaxweyne siilaanyo.
Waxa dhacay arrimo door ah oo muran badan oo siyaasadeed ka dhaliyey Dalka. Waxanay Iibisay Goobo istaraatiiji ah iyo Goobo Dakhli badani kasoo geli jiray. Meelahaas waxa ka mid ahaa Wershada Laydhka Hargeysa oo laga ibiyeey dad Ganacsato ah iyo waliba Qaybo ka mid ah Dhulka Hintiyaa Laynta ee Caasimadda Somaliland.
Madaxweyne siilaanyo Muddo hada laga joogo shan sanno ka hor waxa uu ahaa siyaasi Hor kacaayey Xisbiga Maanta tallada hayaa ee Kulmiye. Kaasoo fikirkiisu ahaa inuu Gabi-ahaanba kasoo hor jeedaa in la ibiyo Hantida Maguurta Lo yaqaan ee la wadaa-leeyahay. Axmed Maxamed maxamuud Siilaanyo ayaa waqtigaas ahaa Nin Marka uu Maqlo Hanti Qaran oo siifo sharciga ka Baxsan lo iibiyo ay ka soo Yeedhaan weedho Kulul oo uu kaga soo hor jeedo. Bulsho badani marna kamay fileyn Madaxweyne siilaanyo inuu xaraashi doono Hantida Dawliga ah.
Hadaba Madaxweyne siilaanyo ayaa markii uu talada dalka la wareegay-ba waxa uu sii kas ugu dhaqaaqay tallaabooyin tiro badan kuwaas oo dhul dan Guud ah iyo Hanti Maguurta ah-ba uu siffo Khadlan uu siiyeey Dad ay caa”ilo yihiin. Sidoo kale, waxa uu wareejiyeey Goobo Ganacsi oo markii hore ahaa Hay”ado Dawladeed isagoo ka dhigay meelo cid Gaar ahii maamusho. Madaxweyne Siilaanyo waxa uu wareejiyeey Hay’ada Korontada caasimada o uu ka iibiyeey Ganacsato sidoo kale waxa uu wareejiyeey Guryo Badan oo uu siiyeey dad ay isir wadaagan. Waxa kale, la ibiyeey meelo badan oo ay lahayd Dawladu kuwaas oo sida la wadaa-og-yahay hadda ay Gacanta ku hayaan sheikhsiyaas Ganaacsato ah.
Waxa iyana jirtaa in Tiroba dhawr jeer ooh ore la isku dayeey in la wareejiyo Dekeda Mgaalada Berbera oo ah Goobta keliyaa ee lagu magaacaabo isha dhaqaalaha Somaliland. Ama laf dhabarta dhuunta uu ah Dalka ayaa dhawr jeer xukuumadani hore iskugu dayday inay wareejiso. Balse umma suuro gelin inay Gacanta uu gasho cidda ay la rabbeen muddo hadda laga joogo waxa ay damacday inay ku wareejiso shirkad shisheeye oo Faransiiska deggan. Waxana damacaas Bahal-nimada ahaa ee Hor istaagay. Kaddib markii ay shacabku sii weyn uga gadoodeen oo ay Muujiyeen da’reen isku mid. Cabsi kadib waxa baaqday isku day-gaas, oo noqday mid dhicis ah. Damacaasi markii uu istaagay waxaa bilaabmay qorshe kale, oo Baabuurta ka soo degtaa Dekeda Berbera. Waxana qorshahaas Ganafka ku dhuftay ganacsatada la soo degtaa Baaburta oo si weyn uga dagaaladamay. Iyagoo hortagay baarlamaanka Somaliland oo ay cabashadooda uu gudbiyeen. Waxa kale oo xukuumaddi sifo hoose uu wareejisay wershada Laydhka Berbera oo iyana shirkad lagu sheegay Wadani la siiyey inay maamusho.
Wararka ugu danbeeyey ee hada laga hellaayo xubno wasiiro ah oo ka mid ah Xukuumada Somaliland ayaa sheegaya inay mmaagalda Dubai heeshiis aan la oogeyn waxa sababay iyo Nuxurkiisaba kula soo geliysaa shirkad lagu sheegay DP wald Dubai. Lama garan karro baahida keenysaa inay mar walba Xukuumada uu Hor kacaayo Axmed Siilaanyo. In sidaas oo dhan iskugu taxaalujiso wareejinta Hantida laf dhabarta uu ah Qaranka Somaliland ee Dekeda Berbera. Waxana Durba shacabka Iyo siyaasiyiinta Somaliland Billaabeen inay ka dagaalaman dhaxal wareejinta Dekeda Somaliland. Dad badan ayaa Madaxweyne siilaanyo ugu baaqay inuu Muddada uu xilka Qaranka huwan yahay. Ilaaliyo Sumcada iyo Haybada uu Dalka ku leeyahay. Waxanay ugu baqeen inuu war iyo Taariikh Dhaxal Gal ah oo aan Moobeyn kaga taggo Dalka. La soo .
Cabdul-casiis Bashiir Nor.